BARADHADA "KOLOBOK": SHARAXAADDA KALA DUWAN, SAWIRADA, ASTAAMAHA IYO ASTAAMAHA BEERASHADA - BEER CAGAARAN
Caleenta baradhada "Gingerbread Man": dabeecadaha miraha rootiga aan qabin
Baradhada huruudda ah waxay ku badan tahay borotiinka, fitamiinnada, carotene. Digriigaas waxaa si weyn loo isticmaalaa karinta, gaar ahaan haddii ay yihiin guri dabaq ah, ballaadhan, mid wanaagsan, sida "Kolobok".
Kala duwanaansho waxaa loola jeedaa bartamihii bartamihii, waxaa loo yaqaanaa iska caabinta cudurrada iyo dhalidda sare. Faahfaahin faahfaahsan ee Kolobok kala duwan, sifooyinka ugu muhiimsan iyo sifooyinka beerashada waxaa laga heli karaa maqaalka.
Baradhada "Kolobok": sharaxaadda kala duwan, astaamaha iyo sawirada
Magaca dugsiga Gingerbread Man
Sifooyinka guud Miiska xilli-ciyaareedka kala duwan oo dhadhan fiican leh
Wakhtiga uurka 90-115 maalmood
Mawduucyada Starching 11-13%
Dad badan oo digriiga ganacsiga ah 120-140 gr
Tirada digriiga duurka 15-18
Yield 130-250 kg / ha
Tayada macaamilka dhadhan wanaagsan, ku haboon jajabka iyo shiilanimada
Gobollada la doorbido Bartamaha
Cadaadiska cudurada ma u adkeysan nematodes
Noocyada sii kordhaya lagugula taliyey inaad dabacsanaato iyo waraabin dheeraad ah
Asalka Machadka Beertu waxay ku beeran karaan. A.G. Lorch
Sifooyinka ugu muhiimsan ee kala duwan ee baradho "Kolobok":
digriiga cabbirka dhexdhexaadka ah, oo miisaankiisu yahay 93 ilaa 140 g;
digriiga waa xitaa, caydhin, oo aan lahayn isdabamarin iyo buro;
diirka ayaa ah mid huruud ah, siman midab leh, cufan, xoogaa yar;
indhaha yaryar, dhexdhexaad ah, qadar yar, oo aan la ogaan karin;
qashirta qashinka ah ee gooyaa waa huruud cad;
Waxyaalaha nacnacku u dhaxeeyo 13 ilaa 15%;
digriiga waxaa ku jira borotiin badan, amino acids iyo carotene.
Kala duwanaanshaha jiirka Kolobok ayaa loola jeedaa miisaanka xilli-ciyaareedka. Laga soo bilaabo beeritaanka digriiga si ay u dillaacaan, dalagga wuxuu socdaa 80 maalmood. Gingerbread Man habboon ee wax soo saarka baradhada: baradho la kariyey oo la qalajiyey, bataato, khudaarta isku qasan, baradhada french frozen. Wax-soo-saarka ayaa sareeya, at digriiga kaydinta ma khasaarin.
Maadada abuurka ma ahan mid khatar ah, digriiga beeritaanka soo socda ayaa si madax bannaan loo soo ururin karaa. Cufan, digo yar yar ayaa si wanaagsan u ilaaliya xididada marka qodaya.
Bush waa mid dhexdhexaad ah ama dheer, qumman kala bar, nooca dhexe. Laamiyayaashu waa dhexdhexaad ah, caleentuna waa mid dhexdhexaad ah. Caleemaha waa mid fudud, cagaaran cagaaran, nooc dhexdhexaad ah ama weyn, nooca dhexe ah. Cidhifyada caleemaha waa qafiif ah qoorta, xididada si cad ayaa loo yaqaan.
Corollas waa kuwo waaweyn, oo laga soo qaato ubaxyo ama kareem. Nidaamka Root waa awood, 10-15 digriiga waxaa la sameeyaa barkad kasta. Dalagyada rootiga waxaa lagu cabbiraa miisaanka iyo cabbirka, tirada alaabooyinka aan badeecaddu ahayn mid aad u yar.
Gingerbread Man - noocyo kala duwan oo miro leh, ka jawaab celinta dharka. Marka loo eego xaaladaha cimilada wanaagsan, laga bilaabo 1 hektar ah mid ayaa laga heli karaa 130 ilaa 220 mitir ee digriiga la doortay. Waxsoosaarka ugu sareeya wuxuu gaari karaa 256 senthir hektar. Baradhada la goostay si fiican ayaa loo kaydiyaa, iyada oo aan laga lumin tayada ganacsiga. Gaadiid waa suurtagal.
Akhriso wax dheeraad ah oo ku saabsan waqtiga iyo heerkulka kaydinta baradho, dhibaatooyinka suurtagalka ah. Iyo sidoo kale ku saabsan kaydinta xilliga qaboobaha, on balakoonka, joodariga, qaboojiyaha, nadiifiyaa.
Kala duwan ayaa u adkaysata kansarka barafka, qolofka caadiga ah, lugta madow, fayraska kala duwan: Alternaria, Fusarium, Verticillus. Caabuqnimada leh cirridka dambe ee caleemaha ama nematode dahab ah ayaa suuragal ah.
Dhadhanka baradho waa fiican yahay. Maaddaama content contentches hooseeyo digriiga ma karkarin ama madowiyada oo la ilaalinayo qaab wanaagsan iyo midab madow ah. Dalagyada rootiga waxay ku habboon yihiin qoto-dheereynta, maraqa dharka, walxaha, dabka.
Baradhadu si firfircoon ayaa loo isticmaalaa wax soo saarka warshadaha: cunto karinta, jajabyo barafaysan, qaso khudradeed. Alaabta la dhammeeyey ma aha oo kaliya inay dhammeeyaan dhadhanka, laakiin sidoo kale aad u qurux badan.
Waa kuwan sawirrada kala duwan ee barafka Kolobok:
Kala duwanaanta kaluunka Kolobok abuuray by jinsiyadaha Ruush (Machadka Beerta Beerta ee lagu magacaabo Lorch). Waxaa ku jira Diiwaanka Gobolka ee Ruushka 2005. Waxaa loo qoondeeyey gobollada Bartamaha iyo Bartamaha Black Earth. Kala duwan waxaa lagula talinayaa beerista warshadaha. Digriiga waxay iibinayaan ama soo saaraan badeecooyin yar yar oo baradho ah.
Beeritaanka suurtagalka beeraha iyo beeraha gaarka loo leeyahay. Waxsoosaarku waa mid sarreeya, baradhada la goostay ayaa si wanaagsan loo ilaaliyaa, iyada oo aan laga luminayn tayada ganacsiga dhowr bilood.
dhadhanka dhadhanka u wanaagsan;
tayada ganacsiga ee fiican ee digriiga;
tayada ilaalinta wanaagsan ee dalagyada xididada;
Dhibaatooyinka kala duwan ee aan la ogaan. Muuqaalka keliya ayaa loo tixgelin karaa Dareemidda dharka iyo waraabinta. Maqaarka cufan wuxuu si fiican u ilaaliyaa digriiga, laakiin waxay ku adkeyneysaa inay nadiifiso.
Agrotechnology waa mid fudud: beeritaanka bilaabmaa May, marka ciidda gebi ahaan diiran. Ka hor inta beero, digriiga waa la kariyaa, waxaa lagu daaweyn karaa kiciyaha kobaca. Kala duwanaanshuhu wuxuu u nugul yahay qiimaha nafaqada ee carrada, sida doorbididda ciidda iftiinka ku salaysan ciid. Digriiga waxaa lagu beeray qoto dheer 10 cm, masaafada u dhexeysa duurka - 30-35 cm. Xannibaadda ballaaran ee qasabka ah, fududeynta daryeelka dhirta.
Inta lagu jiro xilli, dhirta waxaa la quudin jiray 2-3 jeer, beddelid maaddooyinka macdanta ku salaysan ee potassium iyo organics (mullein ama shimbir xaashid).
Suurtogal maaha in lagu xadido bacriminta nitrogen-ku salaysan (HOL ama amooniyam). Geedaha ayaa bilaabi doona in ay helaan cagaaran si ay u dhibto of horumarinta dalagyada xididka.
Diyaarinta dharka sare, u qalantaan. Nafaqooyinka dheeraadka ah waxay kor u qaadaan raasamaalka Nitrates. Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan sida loo abuuro baradhada, goorta iyo sida loo dalbado bacrimin, sida loo sameeyo marka la beero.
Fuuqbinta ugu wanaagsan waxaa lagula talinayaa in la diyaariyo waraabka waraabka. Haddii aysan suurtagal ahayn, beerashada xagaaga ee qalalan waxaa lagu waraabiyaa sida caadiga ah. Abaarta muddada gaaban waxay u dulqaadataa baradhada iyada oo aan cillad lahayn, laakiin la'aanta joogto ah ee qoyaan ayaa si xun u saameeya beergooyska. Hilling iyo mulching waxay gacan ka geysan doontaa nidaaminta qoyaanka iyo cawska.
Calaamad u ah bilowgii beergooyska ayaa noqon doona qalajinta cawska dhirta. Digriiga ugu horeeya waa la jari karaa bartamaha xagaaga., laakiin kala duwanaanshuhu wuxuu gaaraa heerkiisa ugu sareeya ee ku saabsan tobanka sano ee labaad ee Sebtembar. Ka hor inta qodaya waa in la gooyo dushooda oo dhan. Ka dib markii la qodayo, baradho ayaa loo kala saaraa oo la dhigaa si qallalan.
Waxyaalaha abuurka ayaa la uruuriyaa oo loo kaydiyaa si gooni ah. Sida kaydka abuurka ah, waxaad isticmaali kartaa oo keliya digriiga, digriiga caafimaad qaba oo aan waxyeello lahayn.
Beerashada beeraha ee baradhadu waxay leeyihiin waxyaabo gaar ah. Intaa waxaa dheer, waxaa jira siyaabo kala duwan oo loo soo saaro dalag.
On our site waxaad ka heli doontaa macluumaad faa'iido leh oo ku saabsan baradho sii kordhaya ee bacaha iyo foosto, sanduuqyada iyo cows. Iyo sidoo kale dhammaan tiknoolajiyada Hollandka.
Sidoo kale akhri sidii aad u heli lahayd goosashada wanaagsan iyada oo aan jarid iyo hilling, sida loo daryeelo baradho hore.
Kala duwanaanta jiirka Kolobok waxay u adkaysaa kansarka baradhada, qolofka caadiga ah, fayrasyo ​​kala duwan. Waxaa dhici karta in la helo dahab cyst nematode ama dhaleeceyn goor dambe.
For prophylaxis, waxaa lagu talinayaa in lagu daaweeyo beeritaanka leh naxaas oo ka kooban diyaarinta 1-2 jeer muddada ugu sarraysa ee faafa.
Waxay faa'iido u leedahay inay si joogto ah u bedesho beerta beeritaanka baradhada, halka qoyan ay ku beeranayaan phacelia, dabocase ama kaabajka.
Dusha baradho casiir leh ayaa badanaa saameeya aphids ama kuwa Colorado ah. Digriiga waxaa loo hanjabaa by wireworm samaynta soo noqnoqonaya iyo burburiyaan dalagga. Daaweynta hore ee carrada waxay kaa caawineysaa ka hortagga cayayaanka. Xaaladda cayayaanka, beerto waxaa lagu buufiyaa cayayaanka.
Sidoo kale akhri sida looga takhaluso wireworm iyo macnaheedu waxaa laga yaabaa in loo isticmaalo bumbaha baradho.
Kolobok waa nooc ballaaran oo soo saar leh, oo ku habboon beerista warshadaha.
Waxay sidoo kale ka codsan doontaa beeralayda doonaya in ay helaan xitaa, digriiga iyo qurxiyo qurux badan, oo ku habboon iibka. Waxyaabaha abuurka ah ma yaraayaan, baradhadu marar dhif ah ayay jiran yihiin, waxayna leeyihiin difaac wanaagsan.